ကလေးတစ်​ဖက်နဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အပြင်၊ ဆရာဝန်တွေ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရဲ့ နေထိုင်စား​သောက်​​ရေးကိုပါ ထောင့်စေ့အောင်လို့ စီစဉ်ခဲ့ရတယ်​ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ – Maythadin
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်နဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်သူ ချစ်သုဝေက ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် သူမချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦးပါ။ ချစ်သုဝေက လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ထိန်းကျောင်းရင်းနဲ့
အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ၊ ပရဟိတအလုပ်တွေကို တွဲဖက် လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကာလမှာ ချစ်သုဝေရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းကလည်း အလုပ်တွေအရမ်းများပြီး ချစ်သုဝေကတော့ အိမ်မှာနေနေရင်းနဲ့ပဲ အလုပ်တွေ ထောင့်စေ့အောင် လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း အခုလိုပဲ
ပြောလာပါတယ်။ “အောင်ဆန်းတီဘီရောဂါအထူးကုဆေးရုံကြီး မှာ ဆေးရုံမှာပဲနေထိုင်ရတော့မယ်. ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိသော အိပ်ယာခင်းဖျာ+ခေါင်းအုံး (60)+ ခေါင်းအုံးစွပ် (120) တွေကို ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နေ့မကူးပဲ မျှဝေလှူဒါန်း
ပေးနိုင်ဖို့ရယ်၊ Home q ဝင်ရတဲ့ မိသားစုအတွက် အခြေခံစားသောကုန်ရယ်၊ 330ဦးသော လူနာနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် မနက်နေ့လည် ညစာ ရသမျှ စီစဉ်နိုင်ဖို့ရယ် လုံးပမ်းလိုက်တာ “Clean Yangon” က အိမ်ထောင်စုအခြေခံစားသောက်ကုန် 66ထုပ်ကိုလှူမယ်။
မစုကလည်း 4ရက်စာ နေ့လည်စာအလှူရတယ်။ ဒီညမှာ ကောင်းကောင်းနားစေချင်ဇောနဲ့ စက်ရုံရော ဆိုင်ရော ပိတ်နေပေမယ့် ဆရာဝန်တွေကိုကောင်းကောင်းနားစေချင်လို့ ချက်ချင်းလေးစီစဉ်ပေးပါဆိုတာကို ကူညီပေးတဲ့ sweety homeကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် လူအင်အား ၂
ယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့အလှူတွေအထမြောက်အောင်လုပ်နေရတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း မှာ ထူးစိန်ရော အိမ်က တို့ရဲဘော် ကားဆရာလေး ရောတစ်နေကုန်မနားရရှာ။ ကဲ ဘာပဲပြောပြော နက်ဖန် ရိုးမ q centerနဲ့ positiveဆောင်ဘက် ဆရာဝန်တွေလိုတာတွေ လည်း ဒီ နေ့အကုန်အပြီး စီစဉ်နိုင်
ခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အကုန်လုံးကူညီကြတယ်။ COVIDရယ် မင်းတော့လား?? သြော် မေ့တော့မလို့… အင်းစိန်ဆေးရုံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ရဲ့ နေ့လည်စာ ညစာရယ် ရိုးမq centerက volunteer တွေရဲ့ ညစာရယ် တစ်ပတ်စာmenuလည်း ဒေါ် treza ပဲ
ဆွဲတယ် လူပင်ပမ်း စိတ်ပင်ပမ်းနေရတဲ့ကြားထဲ ဒါတွေချည်းစားနေရတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ဒေါ် treကတော့ စီမံတယ် ကလေး ၂ ဖက်နဲ့ ကျွန်မကလေးအမေကို ဘာမှတ်နေလဲ” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ မအားလပ်ပေမယ့် ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်
အပြင်၊ ဆရာဝန်တွေ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စားရေးသောက်ရေး၊ နေရေးထိုင်ရေးကိုပါ ထောင့်စေ့အောင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ်အမျိုးသမီးပါပဲ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတျတှေ ခဈြကွတဲ့ နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျနဲ့ အဆိုတျောဖွဈသူ ခဈြသုဝကေ ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈပမေယျ့ သူမခဈြတဲ့ အနုပညာလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနသေူ တဈဦးပါ။ ခဈြသုဝကေ လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျကို ထိနျးကြောငျးရငျးနဲ့
အနုပညာလုပျငနျးတှေ၊ ပရဟိတအလုပျတှကေို တှဲဖကျ လုပျကိုငျနလေကျြရှိပါတယျ။ လကျရှိ ကိုဗဈကာလမှာ ခဈြသုဝရေဲ့ ဖောငျဒေးရှငျးကလညျး အလုပျတှအေရမျးမြားပွီး ခဈြသုဝကေတော့ အိမျမှာနနေရေငျးနဲ့ပဲ အလုပျတှေ ထောငျ့စအေ့ောငျ လုပျကိုငျနရေကွောငျး အခုလိုပဲ
ပွောလာပါတယျ။ “အောငျဆနျးတီဘီရောဂါအထူးကုဆေးရုံကွီး မှာ ဆေးရုံမှာပဲနထေိုငျရတော့မယျ. ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားအတှကျ အရေးပျေါလိုအပျလကျြရှိသော အိပျယာခငျးဖြာ+ခေါငျးအုံး (60)+ ခေါငျးအုံးစှပျ (120) တှကေို ခတျေသဈဖောငျဒေးရှငျးမှ နမေ့ကူးပဲ မြှဝလှေူဒါနျး
ပေးနိုငျဖို့ရယျ၊ Home q ဝငျရတဲ့ မိသားစုအတှကျ အခွခေံစားသောကုနျရယျ၊ 330ဦးသော လူနာနှငျ့ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားအတှကျ မနကျနလေ့ညျ ညစာ ရသမြှ စီစဉျနိုငျဖို့ရယျ လုံးပမျးလိုကျတာ “Clean Yangon” က အိမျထောငျစုအခွခေံစားသောကျကုနျ 66ထုပျကိုလှူမယျ။
မစုကလညျး 4ရကျစာ နလေ့ညျစာအလှူရတယျ။ ဒီညမှာ ကောငျးကောငျးနားစခေငျြဇောနဲ့ စကျရုံရော ဆိုငျရော ပိတျနပေမေယျ့ ဆရာဝနျတှကေိုကောငျးကောငျးနားစခေငျြလို့ ခကျြခငျြးလေးစီစဉျပေးပါဆိုတာကို ကူညီပေးတဲ့ sweety homeကိုလညျးကြေးဇူးတငျတယျ လူအငျအား ၂
ယောကျတဈပိုငျးနဲ့အလှူတှအေထမွောကျအောငျလုပျနရေတဲ့ ဖောငျဒေးရှငျး မှာ ထူးစိနျရော အိမျက တို့ရဲဘျော ကားဆရာလေး ရောတဈနကေုနျမနားရရှာ။ ကဲ ဘာပဲပွောပွော နကျဖနျ ရိုးမ q centerနဲ့ positiveဆောငျဘကျ ဆရာဝနျတှလေိုတာတှေ လညျး ဒီ နအေ့ကုနျအပွီး စီစဉျနိုငျ
ခဲ့တယျ။ မိတျဆှတှေေ သူငယျခငျြးတှကေလညျး အကုနျလုံးကူညီကွတယျ။ COVIDရယျ မငျးတော့လား?? သွျော မတေ့ော့မလို့… အငျးစိနျဆေးရုံ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှေ ရဲ့ နလေ့ညျစာ ညစာရယျ ရိုးမq centerက volunteer တှရေဲ့ ညစာရယျ တဈပတျစာmenuလညျး ဒျေါ treza ပဲ
ဆှဲတယျ လူပငျပမျး စိတျပငျပမျးနရေတဲ့ကွားထဲ ဒါတှခေညျြးစားနရေတာမြိုးမဖွဈရလအေောငျ ဒျေါ treကတော့ စီမံတယျ ကလေး ၂ ဖကျနဲ့ ကြှနျမကလေးအမကေို ဘာမှတျနလေဲ” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။ ခဈြသုဝကေတော့ ကလေးနှဈဖကျနဲ့ မအားလပျပမေယျ့ ဖောငျဒေးရှငျးအတှကျ
အပွငျ၊ ဆရာဝနျတှေ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှရေဲ့ စားရေးသောကျရေး၊ နရေေးထိုငျရေးကိုပါ ထောငျ့စအေ့ောငျစီစဉျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျအမြိုးသမီးပါပဲ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
MASK တွေကိုတပ်​ဆင်​အသုံးပြုပြီးလျှင်​ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ကြဖို့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ သရုပ်ပြလာခဲ့​သော ခေတ်နဲ့သစ်​
ချစ်​ရပါ​သော မာတာမိခင်​ဖြစ်​သူနဲ့အတူ ​ရိုက်​ကူးထားတဲ့ ဟာသ​ကြော်​ငြာဗီဒီယို​လေးကို ချပြလာတဲ့ ပရိသတ်​ရဲ့အချစ်​​တော်​မ​လေး ဖြူဖြူ​ထွေး (ရုပ်​သံ)
ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတာမို့ ထမင်းချက်မစားရတာ (၂) ရက်ရှိပါပြီသား​လေးတို့ရယ်တဲ့
မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲကလိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ ဒိုက်နဲ့ဆောင်းရဲ့ ပုံ​လေး​တွေပါ